बिल गेट्सका १२ बटा रहस्य केके हुन् ? « Devoted for Economic Devlopment, आर्थिक विकासको लागि समर्पित
बिल गेट्सका १२ बटा रहस्य केके हुन् ?
६ असार २०७२, आईतवार ०५:५७
कलेजमा भर्ना हुन आवश्यक पर्ने स्याटको १६०० पूर्णांकमा उनले गेट्सले १५९० ल्याएका थिए । उनले एक वर्षमा आफ्नो घरको सम्पत्ति करमात्रै एक लाख डलरभन्दा बढी बुझाउँछन् ।हरेक दिन १० लाख डलर खर्च गर्ने हो भने बिल गेट्सको सबै सम्पत्ति सकित २१८ वर्ष लाग्छ ।
प्रकाशित : ६ असार २०७२, आईतवार ०५:५७